Maxkamada Sare Ee Dalka Pakistan Oo Sheegtay In Cadaymo Loo Waayey Eedaymo Xilka Lagaga Qaadi Lahaa Madaxweyne Nawaz Sharif
(Hadhwanaagnews) Thursday, April 20, 2017 18:05:01
Waxaa su'alo ka soo ifbaxeen heshiisyada ganacsi ee qoyska Sharif ka dib markii saddex ka mid ah carruurtiisa lala xiriiriyay xisaabaad bangi oo ay ku leeyihiin dibedda sida lagu baahiyay xogtii la du suyay ee Panama.
Kiiskani ayaa ahaa mid si wayn loo
hadal hayay bilooyiinkii ugu danbeeyay iyada oo la saadaalinayay in arrintani ay go'aamin karto mustaqbalka raisul wasaare Sharif.
Mudaaharaadeyaal isu soo bax ku qabtay meel u dhaw maxkamadda ayaa Sharif ugu baaqay in uu xilka isaga dago waxayna ku dhawaaqayeen "Xilka ka dag, xilaka ka dag Nawaz", sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Suuqyada saamiyada ayaa sare u kacay ka dib go'aanka maxkamada ee sida wayn loo sugayay.
Gabadha uu dhalay Sharif ee Maryam ah ayaa la sheegay in ay quud daraynayso in ay siyaasadda meel sare ka gaarto halka wiilashiisa Xasan iyo Xuseen-na eedeeyn loo soo jeediyay
Xisbiga Pakistan Muslim League - (PML-N) ayaa bogaadiyay go'aanka kuna tilmaamay guul halka gabadhiisa Maryam ay barteeda tweetar-ka ku soo qortay "Mahad oo dhan alle ayay u sugnatay."